China Sprayer na Mist igwe n'ichepụta na ụlọ ọrụ | Zhongmaohua
Igo ocha nke Goggle
Sterile Medical ịgwọ ọrịa uwe
Nkpuchi nchebe nke ozi
Asambodo Ọrịa Nje Virus…
Sprayer na Mist igwe
Iji mkpochapu mkpu nchedo
1. Anwụrụ ọkụ na alụlụ mmiri na-enweta site na nozzles pụrụ iche, na nsonaazụ anwụrụ ọkụ na alụlụ mmiri dị mma. Wụnye anwụrụ anwụrụ anwụrụ ọkụ, anwụrụ ọkụ bara ụba, nsị anwụrụ ọkụ ka ọ dị mma, anwụrụ ọkụ na-erukwa; wụnye ụgbụ mmiri pọmpụ mmiri, mmiri irighiri irighiri mmiri nke mmiri ka zuru ezu na edo edo, irighiri ahịhịa na-ese n'elu, mmetụta ọgwụ na-adịgide, mmetụta mgbochi yana ọmarịcha ezigbo nsonaazụ ngwa ngwa dị ala.
2. dayameta nke irighiri ahịhịa nke igwe alụlụ nke erri na-erughị micron 30. N'ihi ịdị fechaa, a na-enwe ike ndọda nke ukwuu. Ọ gaghị adalata ngwa ngwa n'ihi ike ndọda dịka ụmụ irighiri mmiri nke ndị na-eto ọdịnala mepụtara. Ọ na-ese mmiri, na-ebi ebe, wee banye nke ọma. Ọ nwere ike ị ghasaa ma nọrọ ikuku. Enwere ike ịkọwa ihe nbanye anwụrụ ọkụ dịka nke zuru oke. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ oriri na ọ Disụ Disụ, Ahụike na mgbochi nke ebe ọha mmadụ jupụtara na ha dịka hotels, ụlọ ọrụ ntụrụndụ, ebe a na-eme egwuregwu, ụgbọ ala ndị njem, ụgbọ elu, ụgbọ mmiri, bọs, na ụgbọ njem ọha ndị ọzọ; ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri; ogige ntụrụndụ, mpaghara obibi, eriri ahịhịa ndụ, ọdụ mbufe mkpofu, ahịhịa ala Mgbochi na ịchịkwa anwụnta, ijiji, ọchịcha na ihe ndị ọzọ na-akpata anụ, ugbo mmiri, ọwa mmiri na ụzọ kpo oku, okpuru ulo, ọrụ nchebe ikuku, wdg, iji gbochie mgbasa nke fever ọnya ma ọ bụ nje na oria; Ihe na-egbochi pesti na ebe obibi na ebe nchekwa na ngwa agha
3. Mist sprayer na-eji owu, ọka, osikapa, ọka na ihe ọkụkụ ndị ọzọ, ahịhịa griin haus griin haus, osisi mkpụrụ osisi, oke ọhịa (oke ọhịa akụ na ụba, ubi, obodo a na-elekọta ahịhịa, ifuru ahịhịa), ubi tii na osisi ndị ọzọ maka nchịkwa pesti na ngwa fatịlaịza ngwa. ; mpaghara buru ibu Mgbochi ọrịa na ahụhụ ụmụ ahụhụ na ahịhịa;
Nke gara aga: Ekike Ejiji Ikwusipu Uwe Egwu
Osote: Ahịa a na-eji Ahịa Ahịa Ahịa Ahịa Ndị China Na-ahụ Anya
Laboratories eji maka nyocha sayensị na-ewere ọtụtụ ụdị n'ihi ọdịiche ahụ. Anyị na-enye ike piping usoro zuru ezu.
© nwebisiinka - 2020-2021: Echekwabara ikike niile.